Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy |
Weekend tany Borgosesia
2013-02-25 @ 10:00 in Izaho sy ny ahy
Nahafaly ahy ny dia farany tany Milan tamin'ny weekend teo. Tsy dia tena ilay nahita tany hafa loatra fa ny votoatin-dia mihitsy. Toerana mbola tsy hita tokoa aloha ilay nandehanana na dia nandalovana matetika aza rehefa mandeha any Torino. Tao amin'izany Novara izany aho no nijanona tamin'ny fiaran-dalamby dia niaraka kely tamin'ilay namana izay tonga nitsena sy niantsena. Fa ny toerana tena nitodiana dia any amin'ilay Borgosesia. Nanatrika ny nankalazan'ny fikambanana Gasy Tsy Manavaka (GTM) ny andro natokana ho an'ny tenin-dreny no tena naleha tany. Ny GTM dia fikambanan iray ivondronan'ny Malagasy any Italia avaratra any, Torino, Milano sy ny manodidina. Manao hetsika matetitetika ry zareo mba hihaonana sy hampivondronana ny samy Malagasy. Volana vitsivitsy lasa, ohatra, dia efa nisy ny fifaninanana fitafy malagasy, ny alim-pandihizana malagasy, ary izao indray dia nanao fifaninanana rindran-teny ry zareo ho fanamarihana ny andro ho an'ny tenin-dreny.
Taona maromaro lasa izay, rehefa nanazava tamin'olona vitsivitsy ny atao hoe internet aho, fony mbola vitsy dia vitsy ny Malagasy nampiasa azy, dia nohariko tamin'ny tranomboky (bibliothèque) lehibe izy. Rehefa miditra ao anaty Internet ianao dia miditra ao anaty tranomboky iray lehibe. Rehefa miditra amin'io tranomboky io ianao dia sady mpanjifa no mpanome. Izany hoe sady afaka mitady sy mamaky ny boky ao ianao no afaka mampiditra boky vaovao ihany koa. Izay indrindra no (tohiny)
Antsika ny tontolo
2011-10-05 @ 08:22 in Izaho sy ny ahy
(Le monde nous appartient) Mbola mahagaga ahy ihany ny mahita ny olona sasany manangana rindrina avo dia avo manodidina azy amin'izao fotoanan'ny fanatontoloana izao. Tsy hainy fa arakaraka ny haavo sy hatevin'ny rindrina ajorony no mahatonga azy tsy hahita ihany koa ny aty ivelany. Tsy mampaninona izany, hidio ao fa ho lasanay ny tontolo manodidina rehetra. Hoy aza ilay fiteninay fony kely izay hoe "Efa eny amin'ny volana izahay izao". Ny nantsoinay hoe volana tamin'izany dia ilay toerana iray tanaty alaala fipetrapetrahana, mahatazana nefa tsy tazana... Rehefa mba mandrevirevy iny dia any amin'ny volana no fotoana, mitantara ny zava-misy sy ny zavatra tsy hisy. Koa hidio ao ny rindrinao fa izahay aza efa eny amin'ny volana.
Ampifandraisiko amin'ny sarimihetsika roa hitako tamin'ity herinandro ity. Tomboy (2011) sy Jimmy Riviere (2011). Tantana milaza indrindra an'io mivoaka ny rindrina io. I Laure na dia 12 taona monja aza ao amin'ilay "Tomboy" dia nhatsapa fa tsy ampy azy ny maha vehivavy azy ka niseho ho lehilahy izy hifandraisany amin'ireo boay kely eo an-tanana. Nivoaka ny tontolo. I Jimmy indray na dia nieritreritra hoe hampivelatra azy aza ny fifampitondrana tao amin'ny ankohonana Gitane nisy azy dia mbola nahita zavatra hafa fanampiny izy nivoaka n tontolo. Satria tsy mandao na manary ny tontolo tokoa akory no dikan'ny hoe mivoaka ny tontolo fa mandrava ilay rindrina manasaraka fotsiny hahafahana mifandray amin'ny tontolo hafa.
Izany eo ihany fa vita ihany ny installation'nilay router/firewall nitenenako sinoa tatsy ambadika. Mampiditra ny fitsipika rehetra indray aho io izao. Indro ny sary.
Ð’Ñ‹ Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ Ð»ÑŽÐ±Ð»ÑŽ Ñ‚ÐµÐ±Ñ
Zoma Masina Subiaco
2010-04-03 @ 05:49 in Izaho sy ny ahy
Rehefa mipetraka aty lavidavitry ny tanandehibe aty vao mahita hoe mbola mivavaka ihany ny Italiana. Ny fiangonana aty isaky ny alahady misy lamesa impiry, ary amin'izany feno hatrany. Fa ny tena nanaitra ahy dia ny Zoma Masina omaly. Ohatry ny hoe Katolika daholo ny olona manerana ny tanàna. Vao andro vitsivitsy mialoha aloha dia efa ny fetin'ny Paka foana no resaka. Ary tsy mba toy ny firesaky ny tsy mpino fa resaka mikasika ny fomba hankalazana amim-pinoana ny Paka. Na any amin'ny bar aza (toerana fisotroana kafé ny bar aty fa tsy dia fisotroan-toaka loatra) dia mbola ny pitsopitsony amin'ny fanorohana ny Lakroa Masina, ny processions, ny veillée de prières no heno.
Naka aina kely
2009-09-10 @ 07:15 in Izaho sy ny ahy
Lavalava iny fialan-tsasatra iny. Naka aina kely mihitsy aloha fa mafotaka daholo na ny politika na ny serasera na ny asa na ny fitaizana. Lasa lavidavitra ihany nandritra ny 1 volana latsaka. Ireto ny sombitsombintsary (tohiny)
Tsy afaka mankaiza fa mitaiza
2009-08-17 @ 07:46 in Izaho sy ny ahy
I'm in "mitaiza" mood and enjoying it. :-) Tamin'ny 3 volana voalohany ihany no tena olana tamin'ilay mitaiza, tena tsy afaka nanao zavatra hafa mihitsy satria tena reraky ny niari-tory. Fa amin'izao lasa mahafinaritra ilay izy. Lasa tsy afaka manao zavatra hafa mihitsy fa variana eo. Androany maraina aho izao tara niasa satria nifoha maraina i leiry dia satry foana hitositosy eo am-pandriana. Mihantona na misosa miadana daholo aloha ny kandra rehetra na dia efa manao izay azo atao ihany aza aho rehefa mba matory iny izy mianaka. (tohiny)
33 taona lasa
2009-05-29 @ 09:30 in Izaho sy ny ahy
Mitsingerina androany indray ny andro nankalazana ny mariazin'i Papa sy Mama... 33 taona lasa izay. Dia nanaovana batemy anay ihany koa. Mbola kely dia kely aho tamin'izany fa misy sary iray hany mba tadidiko dia i Mama somebiseby tamin'ny fiomana tao antrano, tadidiko tsara tamin'izany fa tao antrano i mompera itompokolahy Benoit Tsangambelo... dia izay ihany. Tsy nisy tadidiko izay izahay naka sary, na dia hitako aza ny sary taty aoriana, tsy tadidiko ny tao ampiangonana sns. Na izahay natao batemy aza tsy tadidiko mihitsy.
Dia miarahaba an'ireo Ray amandreniko :-)
Fanazavana fohifohy momba ny twitter
2009-02-14 @ 16:00 in Izaho sy ny ahy
Tonga ihany i Aina :-)
2009-02-05 @ 15:42 in Izaho sy ny ahy
Dia tonga ihany i Aina rehefa nandrasana nandritra ny 38 herinandro. Lahy kely tahaka an-drainy... Teraka tamin'ny 5 febroary 2009 tamin'ny 12 ora sy 9 minitra teto Roma.
Anniversaire-n'i papanay androany
2008-12-17 @ 09:21 in Izaho sy ny ahy
Fa ankoatra an'izay dia nandalo tany Paris indray dia nihaona t@ ekipan'ny telomiova.org tany. Tattum, Fafa, Haja. Nahafinaritra ny dinika na dia avy aza ny orana. Tsy ho any Paris intsony indray aloha ato ho ato fa efa be ihany izay :-)
Fa manimba blaogy ihany ilay tweeter kle. Aleo hiverina hiblaogy ihany aho
Tsy tadidiko hoe naninona no io anarana io no nofidiana tamin'ny eritreritra voalohany hampiditra bot (na robot) tao amin'ny Karajia.org. Toa saika natao hoe BotOliva dia toa io no niafarany. Fa na izany na tsy izany dia mahafaly ny mampahafantatra anao an'i BotLives. (tohiny)
2008-09-15 @ 09:44 in Izaho sy ny ahy
Mbola eto Afrika? :-)
Mba naharaka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny Miss Italia aho tamin'ity 2008. Tamin'ny 2004 aho no naharaka farany fa ny taona hafa taorian'izay dia mijery final fotsiny sisa. (tohiny)
Vakansy ihany :-)
2008-07-25 @ 08:24 in Izaho sy ny ahy
Manomboka rahampitso aho dia vakansy mandritra ny andro maromaro. Efa tsy andry intsony ny hiravana androany (tsisy mahay teny gasy ato am-piasana). Inona ny vinavina? Hapetrako eto ihany dia hojereko amin'ny septambra rehefa miditra hoe inona no vita :-p
Vao nigadona tao Madagasikara fotsiny aho tamin'iny dia iny dia efa nivonona fa tsy maintsy hisy izany fahatapahan-jiro matetitetika izany. Io no fantatry ny olona rehetra... hatramin'ny ankizy kely vao 5 taona hoe "delestazy". (tohiny)
1 2 3 ... 33 34 35 Manaraka»